Xooga Dalka Soomaaliyeed oo Badbaadiyeey Kumanaan Shacabka Muqdisho ah (Qormo) – Radio Daljir
Xooga Dalka Soomaaliyeed oo Badbaadiyeey Kumanaan Shacabka Muqdisho ah (Qormo)
Abriil 4, 2019 3:59 g 3
Waxkastoon soomarayba maanta waxaa guul u ah shacabka soomaaliyeed iyo dalkaba in dawladnimadii iyo kala danbayntii dalkeena ay soo noqotay. Waxaana xusid mudan in xoogii dalka soomaaliyeed u istaagay in uu dib boodhka isaga jafo,is turxan bixiyo is xisaabiyo iska dhex saaro oo garto kan cadawga ah ee wali ku dhexjira,kadibna uu god walba oo ay galaan kaga daba galo cadawga iskaa shaday ee dalka iyo dibadaba isku xiran, cadawgaasoo hortaaganaa in lahelo dawlad soomaaliyeed kadibna shacabku helo nabad iyo nolol, helo ganaacsi nabadoon,helo tacliin,helo caafimaad,helo sharaf iyo karaamo iyo xoriyad.
Ciidankii xooga dalkeenu shaqadiisii ayuu qabsaday,waxayna hoojiyeen oo fashiliyeen cadawga gudaha oo shabeelada hoose kasoo maleegay dhagar weyn oo ah qaraxyo ay u qorsheeyeen in ay ku halaagaan kumanyaalo shacabka Mogdisho kunool ah iyagoo kasii laba jibaaray qaraxii soobe lagu xasuuqay shacabka soomaaliyeed. Ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ciil aad ubadan qaba hamuuna u qaba in ay cagta mariyaan cadawgaa soomaaliyeed ayaa ku helay shabeelada hoose meelo ay kaga dhuumaalaysanayeen cadawgu,kadibna cagtay mariyeen booyadihii qaraxa lagu diyaariyayna gacantay ku soo dhigeen.
Hadaba waxaan si cod dheer ah umada soomaaliyeed dal iyo dibadba uugu mahad celinayaan ciidankeena xooga ee ka hortagay dhagartaa iyo geesiyadii wardoonka ahaa ee cadawga hubsaday. qabiil manoqdo qaran soomaalinimadaa nin walbaa wax ku yahay iyadaana nagu filan.saraakiisha iyo taliyaha xooga dalka soomaaliyeed indho qarsho waxay wacad iyo kutaab ku mareen iskuna dhaarsadeen in dalkooda uu san jiri doonin in cadaw ku dhex dhuunto oo shacabka gumaado waana ciribtirayaan. shacabka soomaaliyeedna waa garabtaagan yahay dal iyo dibadba. maanta Ethiopia waxa shacabkeedu ku hurdaa waa ciidanka xooga dalkooda,Kenya waxa shacabkooda difaacayaa waa ciidanka xooga dalkooda,dalwalba waa sidaa,hadaan ciidan jirin dalka difaacaa dawladnimo iyo dal midna majirayo,waxaana booska dawladnimada galaaya kuwa hada lagu raad joogo oo ah shabakada isku xiran ee kala ah sidan.
Shabakadan maafiyada ah,waxna waa la qabtay waxna raadkooda ayaa lagu daba joogaa.kuwani waa kuwa shacabka waligoodba layn jiray waxaa aaad maqlaysaan waxbaa la dilay iyo la qarxiyay waa shabakadaan isku xiran hada dawlad iyo shacaba waa u cadaatay.waxaa ciidankii xooga dalkeenu sugay amaankii dalkuna dagaalbuu ku jiraa,shacabkuna maha in ay gacmaha laabtaan waa in cadawga guryaha ku dhuumanaya ay soo sheegaan iyo hubka sharcidarada ah kaasoo shacabka lagu laayo. dawlada waa in lala shaqeeyaa waayo dalku waa dalkeenii dadkuna waa dadkeenii waa in aan cadawga qabanaa oo dawlada si buuxda u garab istaagnaa oo soomaaliya noolaataa.
Cadawga kaliya ee dalkeena ku soo haray ee hada lagu raad joogaa waa shabkada maafiyada caalamiga ah ee isku xiran,waakuwan kuwa u diidan in shacabka MOGDISHO helaan nabad iyo nolol ee hortaagan dawladnimo soomaaliyeed kana doortay dollar shisheeye siiyo.
Maqaalo Kale 316 Wararka 21771
Waa Sidee Xaaladda Dadka Baracayaasha ah ee Buhoodle? (Daawo)
Guddoomiyaha Bangiga dhexe ee somaaliya oo la ansixiyeey (Daawo)
WAR QORAALKA CINWAANKA ISKA HAGAAJIYA.
OO U QORA WEERAHA SIDA AY ISU QABANAYAAN.
SIXIDA QORAALKU WAA IDIIN MIHIIM EE SAXA.
SIXODA QORAALKU WAA IDIIN MIHIIM.